William Franklyn Miller: mukomana akanaka kwazvo munyika! - Tamban RELAY
William Franklyn Miller: mukomana akanaka kwazvo munyika!
By ALEXIS WAYAN On Nyamavhuvhu 1, 2020
William Franklyn Miller achiri kuyaruka anoita kuti vasikana vadiki varote. Iye ane maziso ebhuruu uye bvudzi raunoda kumhanya neminwe yako.
William Franklyn Miller akaberekwa munaKurume 25, 2004 muLondon. Uyu mukomana akanaka anogara nevabereki vake kuMelbourne, pamwe nevanun'una vake vaviri, Noah naSiena. William haana kumbofungidzira kuti rimwe zuva achazogadzwa korona mukomana akanaka kwazvo pasi. Zvakangodaro, zita iri hachisi chinhu chaanodada nacho, dhizaini yake yakamuita kuti awane matarenda ake semuenzaniso uye mutambi.
Kuputika kweBeirut: kaputeni anoti kutakura zvinhu kwaive ...
Mazana ezvakafa muchikepe chinotama kubva pa ...
Kunyangwe mukurumbira wake, chinonyanya kukosha muzvidzidzo zvake, kunyangwe iye achiri kuongororesa kuti ave muenzaniso uye mutambi. Kuzivikanwa kwaakawana chinhu chaasina kumbofungidzira.
ALEXIS WAYAN 32 Posts 0 mashoko
LIVE Transfer Hurukuro: Arsenal inogona kuwana Coutinho ye £ 9m asi Barca inoda Guendouzi
usatarisira pazviri kune Dolby Atmos
[Chronicle] Google uye mabhizinesi "anofambiswa nevatema" - Jeune Afrique
Kuputika kweBeirut: kaputeni anoti kutakura zvinhu kwaive munzira yeku ...
Dozens vafa mu vafambi chikepe kubva Mauritania
Boka revasungwa makumi mana nemasere vakafa muchitokisi chinopisa, chakawandisa